The Mighty Quest for Epic Loot 1.0.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.5 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ The Mighty Quest for Epic Loot
The Mighty Quest for Epic Loot ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကြီးတွေများကိုလည်းသိမ်းယူသို့မဟုတ်ကြိုးစားနေသေဆုံး, တန်ခိုးကြီးသောသူ၏လက် Quest စတင်ကြပါစို့
Opulencia ၏မှော်မြေများ Enter: အဆိုပါနဲရန်သူများအနိုင်ယူမော်ကွန်းပြန်ပေးလော့ရှာဖွေဘုရင်၏ရာဇပလ္လင်တောင်းဆို!
မော်ကွန်းစစ်ကူနှင့်ဤပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှု RPG စွန့်စားမှုအားလုံးကို၏အားအကွီးမားသူရဲကောင်းဖြစ်လာ!
အသညျးအ ONE-thumb Gameplay
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖမ်းပြီးလျှော့ချရန်ကိုအသာပုတ်! တစ်ပျော်ပါးအရှိန်အဟုန်မှာရိုင်းရန်ပွဲကိုတွေ့ကြုံခံစား! မှင်စာ, အရိုးစု, Banshees နှင့်ကွောကျသတ်တဝါအပေါငျးတို့သမျိုးစုံအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight ။
Opulencia, ရေပေါ်ရဲတိုက်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ္ဘာ့အရှာဖွေပါ။ အဆိုပါမင်္ဂလာရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းကနေသရဲခြောက်သော Pirate သင်္ဘောမှ 100 ကျော်ထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှတဆင့် Hack ။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် HERO ညျဆောကျ
သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏သူရဲကောင်းဖြစ်လာ! ပွင့်လင်းဇာတ်ကောင်အဆောက်အဦတည်ဆောက်မူထူးခြားတဲ့နှင့်နက်ရှိုင်းသော playstyles ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဂီယာ၏ 1000 ကျော်ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူပြုလုပ်ဖန်တီးမှုရရန်အချိန်ပဲ!
ဂီယာ UP, ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး
မော်ကွန်းလက်နက်များ, ကြောက်မက်ဘွယ်လက်နက်နှင့်ဒဏ္ဍာရီ artefacts တန်ချိန် looting အားဖြင့်သင့်သူရဲကောင်း Enhance ။ သင့်ထား, ဖျူး upgrade နှင့်သင့်ဂီယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အချို့သောနဂါးတင်းပါးကန်!
THE TOP မှ RAID
, Rune နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတန်ချိန်နှင့်သင်၏အင်အားကြီးအဆင့်တက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကျွမ်းကျင်မှုသော့ဖွင့်ခြင်း, ကြီးကျယ်သောအရည်အချင်းများတိုက်ဖျက်မည်!
ဧရာ PVE စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
တစ်ဦးချင်းစီရဲတိုက်၏လှည့်ကွက်များနှင့်ထောင်ချောက်ကိုလေ့လာပါနှင့် Opulencia ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ယင်း၏အားကြီးသောသူဌေးနှိပ်စက်။3ကွဲပြားခြားနားသောအခက်အခဲ Modes သာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, All-သင်စားနိုငျသညျ!
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ PVP Arena
အဆိုပါ Arena Enter, ပြင်းထန်သော PvP ပွဲကစား, နှင့်အဆင့်ကိုတက်! ဒါဟာတဦးတည်းဆန့်ကျင်တဦးတည်းဆန့်ကျင်တဦးတည်းဆန့်ကျင်တဦးတည်းပါပဲ။ ကောင်းပြီ ... ဒါကြောင့်လူတိုင်းကဆန့်ကျင်သငျသညျရဲ့ ...
တချို့အရူးအချိန်ကန့်သတ်ရက်စက်ဖြစ်ရပ်များဂိမ်းထဲမှာဆင်းအမြဲရှိပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ဂိမ်း Modes သာ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြန်ပေးလော့, သီးသန့်ဆုလာဘ်: သင်ပင်ပန်းရဘယ်တော့မှမယ်!
•ဤဂိမ်းအခမဲ့-to-download, ဒါပေမယ့်တချို့ In-ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ Device ရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable လုပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တချို့ရဲတိုက်, ထောင်ထဲများကိုလည်းသိမ်းယူသွားနှင့်ယခုသင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာတောင်းဆိုဖို့အချိန်! သင့်ထား Draw နှင့်ဤဖော်ပြချက်ထဲကရ!
- ပြင်းထန်သော hack ကများနှင့်မျဉ်းစောင်းအရေးယူ RPG ဂိမ်း
- ကိုအကောင်းဆုံးထား, ဂီယာနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သူရဲကောင်း Equipment
- ထိုထောင်ထဲတွားနှင့်ဘုရင်၏ရာဇပလ္လင် RAID
- မိကျောင်းနှင့်အရူးအမူးအကြီးအကဲတွေ (PvE) ခုတ်ထွင်
- ထို Arena အခြားသူရဲကောင်းများ Fight နှင့်သူဌေး (PvP) ဖြစ်လာ
မော်ကွန်းအကြီးအကဲတွေ (PvE) RAID သို့မဟုတ်သင့် Quest ပြီးဆုံးနှင့်ဤလှုပ်ရှားမှု RPG စွန့်စားမှုဂိမ်းအတွက်အားလုံးသူရဲကောင်းများရဲ့ဘုရငျဖွစျဖို့ Arena (PvP) တွင်စစ်တိုက်ခြင်း,
ဓား, ပုဆိန်, ဒိုင်း, ခမောက်, ရင်ဘတ်နှင့်ထို့ထက် ပို. : အကောင်းဆုံးဂီယာနှင့်သင်၏သူရဲကောင်းတပ်ဆင်။ ဝင်ရောက်စီးနင်းရဲတိုက်, တွားသည်ထောင်ထဲက, ဒီအတောမသတ်မော်ကွန်းတိုက်ပွဲများစွန့်စားမှုအတွက် ပို. ပို. များကိုလည်းသိမ်းယူဖို့နဂါးအကြီးအကဲတွေနှိပ်စက်။
သင့်ထားမြှင့်, ဒဏ္ဍာရီလာသူရဲကောင်းများလျှော့ချ, ကွောအကြီးအကဲတွေနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဘုရင်၏ရာဇပလ္လင်တောင်းဆို!
Epic များကိုလည်းသိမ်းယူဘို့တန်ခိုးကြီး Quest တစ်ဦးကို Hack သည်နှင့်စွန့်စားမှု RPG ဂိမ်းခုတ်ထွင်။
The Mighty Quest for Epic Loot အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
The Mighty Quest for Epic Loot အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
The Mighty Quest for Epic Loot အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
The Mighty Quest for Epic Loot အား အခ်က္ျပပါ
mat7bk19 စတိုး 10 22.23k
The Mighty Quest for Epic Loot ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း The Mighty Quest for Epic Loot အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Ubisoft Entertainment
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://legal.ubi.com/privacypolicy/
App Name: The Mighty Quest for Epic Loot
File Size: 105.8MB
Release date: 2019-07-10 15:25:33
လက်မှတ် SHA1: E3:D6:DA:23:6E:D1:DF:2C:0D:46:47:6C:7E:90:F2:00:7A:9A:41:1E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ubisoft
အဖွဲ့အစည်း (O): Ubisoft Entertainment
The Mighty Quest for Epic Loot APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ